Guddoomiyaha xisbiga Ucid, Faysal Cali Waraabe oo Eedeeyay madaxweyne Muuse Biixi | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Guddoomiyaha xisbiga Ucid, Faysal Cali Waraabe oo Eedeeyay madaxweyne Muuse Biixi
Guddoomiyaha xisbiga Ucid, Faysal Cali Waraabe oo Eedeeyay madaxweyne Muuse Biixi
Guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee Ucid, Faysal Cali Waraabe ayaa weerar afka ah ku qaaday madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi oo sheegay inuu qorshe la’aan siyaasadeed ku hagayo xukuumaddiisa.
Faysal Cali ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay hogaaminta Biixi oo uu sheegay inay mareyso meeshii u liidatay, islamarkaana dib u dhigtay Somaliland oo horumar wanaagsan u bidhaamayey.
Faysal Cali Waraabe waxa uu sheegay in Somaliland ay ka jirto qorshe la’aan siyaasadeed oo dhinac xukuumadda ah, wuxuuna aaminsan yahay iney taasi dib u dhac ku keentay hormar ay xukuumadda sameyn laheyd.
“Lixdankii waxa ina kharibay waxa ay ahayd Hoggaan xumo, Maantana waxa halkaa inna dhigay waa Hoggaan Xumo, Dadka waxa is dhaafayaa waa Hoggaanka, Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu hoggaan wanaagsan ina siiyo,” ayuu yiri.
Sidoo kale waxa uu dusha u saaray Muuse Biixi dhaqaalo xumada ka taagan Somaliland iyo sicir bararka aan xal laga gaarin sanadihii u dambeeyay, ayada oo ku eedeyay inuu waqtiga xukunkiisa ku lumiyay shaqsi xumeyn iyo xifaaltan siyaasadeed oo aan loo baahneyn, sida uu hadalka u dhigay.
Previous articleDowlada HirShabelle oo qaadan Mudo Bilooyin ah wax mushaar ah
Next articleQasaare ka dhashay Dab ka kacay madarasad diinta lagu barto oo ku taala Hargeysa
Sacuudi Carabiya ayaa si adag u beenisay inay ku lug leedahay muranka boqortooyada Jordan, hase yeeshee xariga la-taliyaha dhaxal-suge Mohamed bin Salman ayaa qalqal...
Sanbaloolshe “ farmaajo waxa uu rabaa in uu ilkaha uga...